Momba ny inona ny zavatra ataon’ny AATIM?
Misolo tena ny Mpanidika teny rehetra eto Madagasikara ny AATIM? Na mila mpandika teny mahay ianao na mila mpandika teny avy eto Madagasikara, AATIM dia afaka manolotra ho anao mpandika teny mahay sy matihanina. AATIM koa dia manomefanamarinana ho an’ny mpandika teny (misy fitambarana fiteny 03 izao).
Oviana no niforona ny AATIM?
Tamin’ny taona 2020 ny AATIM no natsangana.
Nahoana aho no tokony hisafidy hiditra mpikambana ao amin”ny AATIM fa tsy fikambanana hafa momba ny fiteny?
Satria ny AATIM no fikambanana voalohany sy tokana eto Madagasikara izay mahafeno fepetra hanamarina ny maha-mpandika teny ireo mpandika teny.
Inona no tokony ataoko raha te ho mpikambana ao amin’ny AATIM aho?
Voalohany, mila mahafeno ny fepetra takian’ny AATIM iho an’ny fisafidianana mpikambana anao. Faharoa, mila efa nanao ny asa fandikan-teny nandritra ny telo taona ianao farafahakeliny.
Inona no maha-samihafa ny mpikambana Certifié-Pro sy ny Certifié?
Ireo karazana mpikambana roa ireo dia samy voamarin’ny AATIM mazava ho azy ary manana sata mamiratra eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena . Kanefa, ny mpikambana Certifié-Pro dia olona efa manana traikefa betsaka, mahay ary matihanina, mpandika teny nandritra ny folo taona farafahakeliny, ary ny mpikambana Certifié kosa manana traikefa kely kokoa saingy nanao ny asa fandikan-teny nandritra ny telo taona na mhoatra.
Nahoana aho no mila olona handika teny nefa efa misy ankehitriny ny fitaovana afaka manao izany?
Tsy afaka hanolo ny atidohan’ny olombelona na oviana ny milina. Tsy afaka hahatakatra ny tsipiriany rehetra momba ny teny ny solosaina na koa handika ny hevitra tian’ny lahatsoratra hampitaina. Fandikana mifototra amina rakibolana tsotra ihany no afaka omeny. Tsy azonao atao ny manontany fanazavana momba ireo fitaovana ireo na manazava ny sahan-kevitra iorenan’ny antontan-kevitra ampiasainao amin’izy ireo.
Antoka lehibe ho an’ny sarinao, lazanao, ary ny fianteherena aminao izany? Mety hanampy ny fitaovana sy tolotra toy ny Google Translate rehefa hitady ny hevitra ankapoben’ny antontan-kevitra iray ianao ary mila izany maika na hanamarina azy. Saingy tsy azonao atao ny mampiasa azy ireo handikana teny araka ny marina sy mahomby nefa mitazona hatrany ny hafatra kendrena, tsy ho azonao an-tsaina akory ny vokatr’izany raha mianina fotsiny amin’izany ianao. Ny fiaraha-miasa amina mpandika teny tena izy no hany fomba azo itokisana rehefa mila mampita hafatra fiteny hafa ianao.
Inona no mha-samiy hafa ny mpandika teny an-tsoratra sy mpandika teny am-bava?
Samy mampita hafatra avy amin’ny teny iray( na kolontsaina) mankany amin’ny teny hafa ireo as aroa ireo. ny maha samy hafa azy dia ny mpandika teny an-tsoratra dia miasa amin’ny soratra raha toa ka miresaka kosa no asan’ny mpandika teny am-bava.
Iza no antsoina hoe mpandika teny voamarina?
Ny mpandika teny voamarin’ny AATIM dia manondro ny olona nahazo fanamarinana manokana.
• nahavita fanadinana nokarakarain’ny AATIM
• manaiky tanteraka ny sata arak’asa mifehy ny AATIM;
Inona avy no fiteny ampiasain’ny AATIM?
Hatreto aloha dia mifantoka amin’ny teny Anglisy, Frantsay ary ny teny Mlagasy ny AATIM;
Ahoana no fomba fidirana ao?
Afaka misoratra anarana ato amin’ny tranonkala ianao na any amin’ny biraon’ny AATIM any Malaza Ampitatafika Antananarivo, na mifandray mivantana amin’ny tompon’andraikitry ny AATIM maka torohevitra.
Mila sarany ve ny fidirako ho mpikambana?
Toy ny fikambanana rehetra tsy mitady vola, ary araka ny lalàna anatiny mifehy ny AATIM dia tsy maintsy mandoa latsak’emboka voafaritra isan-taona izay te ho mpikambana.
Inona no azoko atao mba hanomanana fanadinana hahazoana Fanamarinana avy amin’ny AATIM?
Amin’ny alalan’ny fisoratana anarana ao amin’ny AATIM, ny mpikambana tsirairay dia manana fitaovana sy antontan-taratasy maro isan-karazany mba hiomanana amin’ny fanadinana fanamarinana. Tsy vitan’ny hoe manatanteraka fitsapana fanmpiharana miaraka amin’ny valiny izy ireo, fa eo koa ny hetsika an-tserasera sy lahatsoratra koa izay anisan’ny tena manampy.
Tokony ho mpikambana ao amin’ny AATIM ve aho vao afaka hanao ilay fanadinana?
Eny, mila miditra ho mpikambana ianao raha te-hanao fanadinana na fitsapana fampiharana. Iray amin’ireo tombony azo amin’ny maha mpikambana ao amin’ny AATIM izany.
Efa manana traikefa efa x taona aho, tokony mbola hanao ilay fitsapana fampiharana ve aho?
The practice test is always helpful because it is a way for you to see what a certification exam looks like. Ny fanehoan-kevitra rehetra aorin’izany dia mety hanampy anao hisoroka ireo diso nataonao nandritra ny fitsapana fampiharana.
Ohatrinona ny vola haloa raha te hanao ny fitsapana fampiharana?
Maimaimpoana tanteraka ny fitsapana fampiharana raha vao mpikambana ao amin’ny AATIM ianao. Tsy misy fitsapana fampiharana ho an’ny tsy mpikambana.
Azo antoka fa mahazo asa ve aho raha manana ilay Fanamarinana?
Ny fanamarinana omen’ny AATIM dia tsy afaka miantoka ny fahitanao asa anao, fa manampy amin’izany kosa. Ny fanamarinana omen’ny AATIM dia hanasongadina ny fahaizanao sy ny talentanao eo amin’ny tsenan’ny asa. Ireo masoivoho, orinasa misehatra amin’ny fandikan-teny ary fikambanana iraisam-pirenena dia mitaky porofo manamarina fahaizana foana rehefa mamoaka tolotra asa izy ireo.